[8888 NEW GENERATIONS] အခုကုလားတွေနဲ့ ဖြစ်နေ တဲ့ပဋိပက္ခကိုလူ...
Black Angle posted in 8888 NEW GENERATIONSBlack Angle 7:16pm May 24 အခုကုလားတွေနဲ့ ဖြစ်နေ တဲ့ပဋိပက္ခကိုလူ့ အခွင့်အရေးလို့ ပြောနေ တဲ့အကုန်လုံး နိုင်ငံတကာမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲကြည့်လိုက်အုံးဒီတိရစ္ဆာန်တွေဟာ အဂ`င်္လန်မှာ ၂၀၀၇ မြေအောက်ရထားအကြမ်းဖက်မှုထက်ဆိုးတဲ့ ၃ဆလောက်ကြီးတဲ့ ဗုံးကိုဖောက်ခွဲဖို့ လုပ်တာကိုမိတယ် နယူးယောက်မှာဘင်္ဂလီအကြမ်းဖက်သမားကိုမကြာသေးမီကမိတယ် လစ်ဗျားမှာအမေရိကနသံအမတ်အသတ်ခံရတယ် ၊ထိုင်းတောင်ပိုင်း ၊ဖိလစ်ပိုင်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာသိလား ။အိန္ဒိယမွမ်ဘိုင်းအကြမ်းဖက်မှုမှာဘယ်သူတွေပါတယ် ဘဂ`င်္လားဒေ့ရှ့် အစိုးရ နဲ့ကုလားတွေပေါင်းပြီးမြေလှန်စနစ်နဲ့ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအဆောက်အအုံတွေကိုဖျက်စီးသွားတယ်ဗုဒ္ဒဂါယာမှာအကြမ်းဖက် ဗုံးခွဲဖို့ကြံစည်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ် ။လူ့ အခွင့် အရေးလို့ ပြောနေတဲ့ဟာတွေကိုပြောပြလိုက်မယ် ဒီကုလားတွေဟာမောင်းတောမြို့ နဲ့ပတ်ဝန်းကျင် ဒေသဟာ ကသူ့ တို့ ရဲ့ဗဟို ကိုယ့်အိမ်ကိုမီးရှို့သနားစရာ ပုံတွေအတင်းရိုက်ပြယုတ်မာကောက်ကျစ်လိမ်လည်ဝါဒဖြန့် နေ ပြီး လူသားတံတိုင်းလုပ်ပြီးတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲခွဲထွက်ခွင့်တောင်းယူသွားတာမောင်း တော နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသ ဟာ မြေပုံပေါ်မှာ ပဲရှိတော့တယ ဒီကောင်တွေသိမ်းသ်ွားင်္ပြ် နိုင်ငံရေးသမားလို့ ပြောနေ တဲ့လူတွေက ဒင်းတို့ရဲ့ အာဏာရရေး၊ပါတီလည်ပတ်ရေး တို့ အတွက် အထောက်အပံ့ ရရေး ၊ဒီကုလားတွေရဲ့ မဲရရှိရေး ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေက မြန်မာနိုင်ငံ ၊မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းနဲ့ မြန်မာပြည်သူလူထုကိုနောက်ကျောကိုဓါးနဲ့ ထိုးနေ ပြီ၊ခင်ဗျားတို့ ခံယူထားတဲ့ နိုင်ငံရေးဆိုတာဘာလဲ ပါတီအာဏာရရေးလား........... တရားဥပဒေစိုးမ်ိုးရေးလို့ ပြောနေ ကြတဲ့လူတွေကို မေးလိုက်အုံးမယ် ခင်ဗျားတို့ ပြောနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရောက်ဖို့ ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲခင်ဗျားတို့ ဘာတွေလုပ်နေလဲ...........? ၂၀၀၈ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးကခင်ဗျားတို့ ကိုရီနေတယ် တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေ ဥပဒေစိုးမိုးတဲ့နိုင်ငံတွေကိုကြည့်လိုက် Foreign Policy နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒနဲ့ Local ပြည်တွင်း မူဝါဒတို့ ဟာ နိုင်ငံရဲ့ အကျိုးစီးပွားပေါ်မူတည်ပြီးမောင်းနှင်ရတယ်....... လျှောက်မပြောနေ ကြနဲ့ လက်ရှိအခြေအနေမှာ ဖြေရှင်းရမဲ့ အရာတွေအများကြီး ပဲ စစ်တပ်ကဟာတွေကိုလဲပြည်သူလူထုကဒီလောက်လက်မခံပါဘူး .။ကိုယ့်လူထုနဲ့ကိုယ့်သံဃာကျတော့သတ်တယ် မင်းတို့ တွေအကုန်လုံးထမိန်ဝတ်ထားလိုက်ကြအကုန်လုံးကိုရှင်းရှင်းလေးဘဲပြောမယ်ခင်ဗျားတို့ နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ စစ်တပ်ကဟာတွေ မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင် လူထုကသူ့ ဖာသာသူ ဖြေရှင်းသွားလိမ့် မယ် ကုလားတွေတစ်ခုတစ်ခုပဲသတိပေးလိုက်မယ်သိပ်ဝမ်းသာမစောနဲ့အုံး အမျိုးသားရေးနိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သတ်လာရင် အမြစ်ကပါဆွဲလှန်ပစ်ခဲ့တဲ့သာဓကတွေအများကြီး ငါတို့ ခောတ်မှာငါတို့ သမိုင်းကိုအရိုင်းမခံနိုင်ဘူး ထပ်ပြောမယ်မင်းတို့ အားကိုနေတဲ့ OIC တို့ UN ကပ်ပါးတွေ အစ္စရေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက် မင်းတို့ ကို အစ္စရေးကရီနေတယ် မြန်မာ နိုင်ငံကအမျိူးသားရေးညီညွတ်တဲ့အချိန်မှာအားလုံးကဦးညွတ်ခဲ့ရတာ ကြီး ပဲ မင်းတို့ ရဲ့ ကလိမ်ကကျစ်ယုတ်မာမှုတွေဟာ အကျိုးစီးပွားနောက်လိုက်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ စစ်တပ်ကဟာတွေကိုပဲရမယ် ငါတို့ သမိုင်းကိုတော့ အရိုင်းခံမှာ မဟုတ် ဘူး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကိုပြန်ဖို့ စဉ်းစားထားကြ လိုအပ်ရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ပါထိပ်တိုက်တွေ့ ရမယ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးမရိုးသားမှု၊ လူဦးရေ ပေါက်ကွဲမှု ဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေဟာဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေက်ိုအကြီးအကျယ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေပြီး ၊သူ တို့ ရဲ့ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးးစီးပွားရေး လူမှုရေးဟာမတည်ငြိမ်ဘူး ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစီမံကိန်းချပြီးတော့ ဝါးမြို ဖို့ ကြိုးစားနေတာ တွေဟာ ဘဂ`င်္လီအစိုးရရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်ဆောင်မှုတွေပဲ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့ အုံးမှာပါ အခုစောက်သုံးမကျတဲ့ အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံတွေရေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရကမင်းတို့ ကိုပါးပါးလေးနှပ်နေ ပြီမင်းတို့ စောက်သုံးမကျမှုတွေဟာ ငါတို့ နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းကိုရိုင်းစေတော့ မယ် ...........................အခုနိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာအစိုးရဖြစ်ပြီဆိုပါတော့ အခုကိစ္စကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်မှာလဲ ခင်ဗျားတို့ အရည်အချင်းရှိရဲ့လား ခင်ဗျားတို့ ကိုခင်ဗျားတို့ သိနေတယ် လက်ရှိ အစိုးရ ကလဲစောက်သုံးမကျ အတိုက်အခံတွေကလဲစောက်သုံးမရ နိုင်ငံကတော့ ချောက်ထဲကျနေ ပြီ မင်းတို့ အသုံးမကျတာကအရေးမကြီးဘူး ငါတို့ ကအကြီးအကျယ်အစော်ကားခံ အသတ်အဖြတ် ခံနေရတယ် ငါတို့ ကတော့ ရှင်းတယ် ငါ့ တို့ သမိုင်းငါတို့ နိုင်ငံအတွက်ကို ရခိုင်ကိုဘယ်တော့ မှာအဆုံး ရှုံးခံမှာမဟုတ်ဘူး ဒါစစ်ဖြစ်နေတာ ပြည်တွင်းစစ်မဟုတ်ဘူး ကျူးကျော်စစ် ကဲမြန်မာတို့ အမျိုးသားရေးနိုးကြားကြပါစို့ငါတို့ နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းဟာငါတို့ လက်ထဲမှာဘဲရှိစေရမယ် ငါတို့ ကတော့ရှင်းတယ် ငါတို့ မောင်းတောကိုပြန်သိမ်းမယ် မင်းတို့ ဘယ်ကလာလဲမင်းတို့ လာတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကိုပြန်.................ဘာလဲလူ့ အခွင့် ရေး ဒီမိုကရေစီ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့် မင်းတို့ မွတ်စလင်ကမာကိုသွားပြော.။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။Ko HtutView Post on Facebook · Edit Email Settings · Reply to this email to addacomment.
[လွပ်လပ်ခြင်း] အောက်ပါ ဥပဒေစာအုပ်များ အရေးတကြီးလိုအပ်နေပါတယ်။
လင်း သက် posted in လွပ်လပ်ခြင်းလင်း သက် 7:13pm May 24 အောက်ပါ ဥပဒေစာအုပ်များ အရေးတကြီးလိုအပ်နေပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး ကူညီပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ကူညီပေးစေလိုပါတယ်။ PDF ဖိုင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် heinlinn.thet@gmail.com သို့ ပေးပို့ စေလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ (က) ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် အရေးပေါ်စီမံမှု အက်ဥပဒေ (ခ) ၁၉၇၅ ခုနှစ် " နိုင်ငံတော်အားနှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလိုသူများ၏ ဘေး အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်စောင့် ရှောက်သည့်ဥပဒေ " (ဂ) The Partnership Act (ဃ) The Union of Myanmar Co-operative Societies Law, 1970View Post on Facebook · Edit Email Settings · Reply to this email to addacomment.
မှတ်သားစရာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားချက်..................... “သတင်းသမားတွေရဲ့ သြဇာကလည်း မနည်းဘူး၊ အဲဒီတော့ ဒီသြဇာကို အကောင်းအတွက် သုံးပါလို့ အန်တီသတိပေးချင်တယ်။ တချို့သတင်းသမားတွေက ကိုယ်သတင်းထူးဖို့ သတင်းဦးဖို့ အဲဒါကို အဓိက ထားကြတယ်၊ သတင်းထူးတာ သတင်းဦးတာလဲ ကောင်းပါတယ်၊ ဒါတင်မကသေးဘူး သတင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ လုပ်တဲ့နေရာမှာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အကျိုးကို ဘယ်လောက် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သလဲဆိုတာ စဉ်းစားပေးစေချင်တယ်။”
[National League for Democracy ( NLD ) အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်] New photo
[Freedom from Fear 2] Australia and New Zealand Banking Corp Ltd ANZ...
[Big Brothers & Sisters] Myanmar Express ဘလော့ခ်ကို...
[ကျန်းမာရေး အမေးအဖြေ] ရေသောက်တာ ဟာတစ်ချို့ကကောင်းတယ်လို့ပြောကြပါတယ် ......
[Big Brothers & Sisters] Australia and New Zealand Banking Corp Ltd ANZ...
Dangerous for Myanmar
ခေတ်ပြိုင် မဇ္ဈိမ ဧရာဝတီ မိုးမခ ရိုးမ (၃) နေ့သစ် နိရဉ္စရာ ရှမ်းသံတော်ဆင့် kaowao သတင်း
သံလွင်သတင်းစဉ် Burma Today ကရင်သတင်းစဉ်
BBC DVB လက်နတ် သုံးမျိုးကိုင်ဆွဲ ရဲရဲတိုက်ပွဲဝင်ကြ
> မကြောက်တရားလက်နတ်> သွေးစည်းညီညွှတ်ရေးလက်နတ်> စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေး ရည်မှန်း ပန်းတိုင်တခုတည်းချမှတ်၊ ရှေးရှု၊ ရင်ဆိုင် ချီတက်ရေးလက်နတ်ဦးဝင်းတင်
အမဲရောင် ပန်းချီကားမှ အလင်းစက်တို့
ကောက်ကြောင်းရေးခဲ့သူတို့မရှိတော့သည့်နောက်ဝယ်ငရဲပြည် ဗီဇာကျထားသူအချို့ပုတ်သင်ညိုတစ်ချို့ကို စုစည်းအမဲရောင် စုတ်တံတွေကိုင်ဆွဲလျက်ပိန်းပိတ်အောင်ခြယ်နေလည်းအလင်းစက်တွေ အလင်းစက်တွေပန်းချီကားအနှံ့တဖြတ်ဖြတ် တောက်နေဆဲ ဟေ့ !
Link for on-line Books၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ/အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ မူကြမ်း/မြန်မာ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ နှိုင်းယှဉ်ချက်များ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်NLD၏၁၉၉၀ပြည့်ယာယီဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ ရွှေဂုံတိုင် ကြေငြာစာတမ်း၁၉၉၀ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲမှတ်တမ်းမြန်မာ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ထူးခြားမှုရက်စွဲမှတ်တမ်းများပြည်သူ့လွတ်တော်ကော်မတီ၏သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းအမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအဆိုပြုချက်လမ်းညွန်မြေပုံနှင့်၁၉၉၃အတုအရောင်ညီလာခံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ကာလ ၀၂-၀၃ဒီပဲယင်း အရေးအခင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားတရားစွဲဆိုရုံးတင်စစ်ဆေးမှုဖုန်းမော်အရေးအခင်း(သို့)သွေးစွန်းသောတနင်္ဂနွေနေ့	မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်ရေးနေ့(သို့)ဖုန်းမော်ကျဆုံးသည့်နေ့တံတားနီနေ့(သို့)တံတားဖြူအရေးအခင်းကလေးများ ၏ ဒေါသမာန်သားသတ်သမား စိန်လွင်၁၉၇၄ ခုနှစ်
ဦးသန့်ဈာပန အရေးတော်ပုံအမြင့်ပျံခွပ်ဒေါင်း(သို့မဟုတ်)ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး7-July ကျေင်းသား အရေးတော်ပုံမြန်မာနိုင်ငံ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု သမိုင်းကိုဗဟိန်းမှသည် ကျော်ကိုကိုအထိကိုဗဟိန်း (သို့) ညီညွတ်ရေး ဗိသုကာအရေးတော်ပုံ (၄) စောင်တွဲပြည်လုံးကျွတ်လူထုဆန္ဒခံယူပွဲအကြောင်းသိကောင်းစရာ
ဒီမိုကရေစီ ဆိတ်သုဉ်းခြင်း ၊ ညီမျှမှု ဆိတ်သုဉ်းခြင်း အာဆိယံပဋိဥာဉ်စာတမ်းNLD အားနအဖစစ်အုပ်စု၏တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းမှုများNLDဗဟိုအလပ်မှုဆောင်များလူကြီးများ၏လွတ်လပ်ရေးကြောက်ရွံ့ခြင်းမှလွတ်ကင်းရေးနှင့်အခြားစာတမ်းများစစ်အုပ်စုသက်တမ်းရှည်နေသရွေ့(ထောင်ဝထ္ထု)လူရှင်သချိုင်းများ အကြောင်းမြန်မာမြောက်ကိုးရီးယားဆက်ဆံရေးမြန်မာ့တပ်မတော်တည်ဆောက်ခြင်းအမှောင်ကြားက ဗမာပြည်ဗမာ့ အကြိုသမိုင်းမြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းမြေပုံများမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေးမြင်ချက်အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး ဆိုရာဝယ်နိုင်ငံရေး နှင့် ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ် နှင့် မြန်မာ့နိုင်ရေးဖက်ဒရယ် အကြောင်းလေ့လာခြင်းလစ်ဘရယ် ဒီမိုကရေစီရွှေသဘာဝဓါတ်ငွေ့၏ ပထ၀ီနိုင်ငံရေးသွေး နှင့် မြေကြီးပဉ္စမ မြန်မာနိုင်ငံတော် တည်ထောင်ခန်းဦးဘဂျမ်း ၏ နိုင်ငံရေးအမြင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ နိုင်ငံရေးဖွင့်ဆိုချက်များဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဗမာ့တော်လှန်ရေးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ သမိုင်းဝင်မိန့်ခွန်းကျွန်ုပ်တို့၏ မြေယာများကိုသိမ်းပိုက်ထားခြင်းကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှမြန်မာသံရုံးလိပ်စာများယုံကြည်ချက် ကဗျာများ (၁)လွတ်လပ်ရေးစိတ်ဓါတ်မျိုးစေ့ချခဲ့သူဆရာတော်ဦးဥတ္တမအမေ့ခံရသော မြန်မာ ကိုယ်စလှယ် အဖွဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဘယ်သူသတ်သလဲဗိုလ်ကြီး အုန်းကျော်မြင့်ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေး ဗိသုကာ ဦးသန့်ဗမာ့ အောင်ဆန်းမန်းဝင်းမောင် အတ္ထုပ္မတ္တိအောင်ဆန်းသူရိယ ဗိုလ်တိုက်ချွန်းရွှေဥဒေါင်းစုံထောက်မောင်စံရှားပေါင်းချုပ်-ဒုတိယတွဲနိုင်ငံရေး ဟာသများ
ဗီဒီယို သတင်း ကဏ္ဍ
မြန်မာပြည်ကို နိုင်ငံတကာ စီးပွါးရေး ပိတ်ဆို့မှုတွေ
May 20 (50)
May 12 (50)
May 02 (50)
Apr 30 (50)
Apr 27 (50)
Apr 24 (50)
Apr 23 (50)
Apr 22 (50)
Apr 15 (49)
Apr 14 (48)
Apr 13 (46)
Apr 12 (53)
Apr 11 (48)
Apr 10 (46)
Apr 07 (58)
Apr 05 (45)
Apr 04 (49)
Apr 02 (80)
Mar 27 (48)
Mar 26 (68)
Mar 24 (34)
Mar 18 (67)
Mar 17 (33)
Mar 13 (50)
Mar 09 (50)
Mar 03 (50)
Feb 25 (50)
Feb 24 (50)
Feb 18 (50)
Feb 16 (50)
Feb 15 (50)
Feb 05 (50)
Feb 02 (50)
Jan 25 (50)
Jan 24 (50)
Jan 22 (50)
Jan 01 (50)
Dec 27 (49)
Dec 26 (49)
Dec 24 (45)
Dec 23 (62)
Dec 20 (60)
Dec 19 (49)
Dec 17 (70)
Dec 16 (37)
Dec 15 (36)
Dec 13 (56)
Dec 12 (38)
Dec 07 (52)
Dec 05 (63)
Dec 04 (37)
Nov 25 (59)
Nov 22 (47)
Nov 21 (63)
Nov 20 (51)
Nov 16 (55)
Nov 14 (55)
Nov 13 (66)
Nov 08 (66)
Oct 31 (50)
Oct 30 (50)
Oct 29 (50)
Oct 23 (50)
Oct 15 (50)
Oct 13 (50)
Oct 12 (50)
Oct 10 (50)
Oct 08 (50)
Oct 05 (50)
Oct 04 (50)
Oct 02 (50)
Sep 30 (50)
Sep 29 (50)
Sep 28 (50)
Sep 27 (50)
Sep 25 (50)
Sep 24 (50)
Sep 18 (50)
Sep 16 (50)
Sep 15 (50)
Sep 12 (50)
Sep 10 (50)
Sep 09 (50)
Sep 07 (50)
Sep 06 (50)
Sep 05 (50)
Sep 03 (50)
Sep 01 (50)
Aug 31 (50)
Aug 30 (50)
Aug 29 (50)
Aug 28 (50)
Aug 25 (50)
Aug 24 (50)
Aug 23 (50)
Aug 21 (50)
Aug 20 (50)
Aug 19 (50)
Aug 18 (50)
Aug 14 (50)
Aug 12 (50)
Aug 11 (50)
Aug 10 (50)
Aug 09 (50)
Aug 08 (50)
Aug 07 (50)
Aug 06 (50)
Aug 05 (50)
Aug 04 (50)
Aug 03 (50)
Aug 02 (50)
Jul 25 (50)
Jul 24 (50)
Jul 21 (50)
Jul 14 (50)
Jul 13 (50)
Jul 10 (48)
Jul 09 (57)
Jul 06 (50)
Jul 05 (50)
Jul 04 (50)
Jul 02 (50)
Jun 29 (50)
Jun 28 (50)
Jun 27 (50)
Jun 20 (50)
Jun 19 (50)
Jun 17 (50)
Jun 11 (50)
Jun 03 (50)
Jun 02 (50)
May 31 (50)
May 26 (50)
Apr 13 (50)
Apr 09 (50)
Apr 07 (50)
Mar 30 (50)
Mar 29 (50)
Mar 18 (50)
Mar 14 (50)
Feb 29 (50)
Feb 24 (51)
Feb 20 (56)
Feb 18 (67)
Feb 16 (46)
Feb 14 (39)
Feb 13 (35)
Feb 12 (53)
Feb 10 (63)
Feb 09 (42)
Jan 09 (99)
alpha zaw gyi font
စာလုံးပုံစံ အကြီး/အသေး ပြောင်းရန် + + + + +
DID မဇ္ဈိမ နွေဆူးလင်္ကာ
Flyingpeacock network media ဥတ္တရ ခြေလှမ်းသစ်
ဒို့အာဇာနည် ဒေါင်းမင်း လမင်းခင် ခင်မင်းဇော် BWRPC ငွန်းငယ်မိုး Co2zenith ကိုနစ်နေးမန်း ကိုမိုးသီးဇွန် လွင်ပြင်ထဲက ၀ဏ္ဏ ကိုအိုးဝေအောင် ဆုံဆည်းရာ မကြီးသဒ္ဓါ လင်းလက်ကြယ်စင် ကောင်းကင်ကို ရွှေဝါရောင်သတင်းလွှာ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ ဖိုးရှုပ်လေး အမိမြန်မာပြည်အတွက် ကောလဟာလများ မင်းမော်စိုး မြေသြဇာအဖွဲ့ Generation Wave ဒီဇိုင်း ကိုမျိုး Labels
Home | News | Video | Poem | Link | Media | Proxy | Font Download | Contact Us
Copyright © 2010 | Human Rights Myanmar Designed by : Phyowai